Shwengwe Games - Page 152 of 156 - Media and Entertainment
မင်္ဂလာ ဦး ညနှင့် ကိုယ်ဝန်တားဆေး အလုံး(၂၀)
June 16, 2019 Shwengwe Games 0
မင်္ဂလာ ဦး ညနှင့် ကိုယ်ဝန်တားဆေး အလုံး(၂၀) မင်္ဂလာဦးညပြီးတော့ နောက်တစ်နေ့မှာ လူငယ်ဇနီးမောင်နုံ၂ယောက် ဆေးခန်းသို့ အရေးပေါ်ရာက်သွားပါသည်…။ ဆရာဝန် – ဘာဖြစ်တာလဲဗျ ယောင်္ကျား – ဆရာ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက ကိုယ်ဝန်တားဆေး အလုံး ၂၀ လောက်သောက်မိသွားတယ်ဗျ…တစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့လာပြတာပါ… ဆရာဝန် – ဟေ…. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ […]
June 15, 2019 Shwengwe Games 0
ကျောင်းဆက်တက်ရန် အခက်ခဲရှိပြီး စားဝတ်နေရေး အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ ၄ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်မိန်းကလေး ရေကြည်မြို့နယ် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ကျောင်းသူတစ်ဦး ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ရေး အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိ ပါတယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရေကြည်မြို့နယ် ကက္ကူလေး အုပ်စု ကုလားကုန်းကျေးရွာမှ ဦးအထွန်းလေး၏သမီး မခိုင်သဇင်ထွန်းသည်၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ကုန်းပြင် စာစစ်ဌာနတွင် ခုံအမှတ် […]
အံ့ဆုံး ​ပေါက်​တဲ့အချိန်​ ခံရခက်​တဲ့ ​ဝေဒနာကို ဘယ်​လိုကုသကြမလဲ
အံဆုံးပေါက်ပြီဆိုတာနဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရသတဲ့။ဒါပေမဲ့အံဆုံးပေါက်ချိန်မှာ မကြာမကြာပြဿနာကြုံရတတ်တာ ကြားဖူးကြမှာပါ။အံဆုံးပေါက်ချိန်သွားဖုံးကိုက်လို့ ဆေးခန်းပြေးရတာလည်းမနည်းပါဘူးနော်။ ဒီတော့အံဆုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကစပြောကြရအောင်။အံဆုံးဆိုတာဟာ၃ ချောင်းမြောက်အံသွားပါ။လူအများစုမှာအပေါ်၂ ချောင်း အောက်၂ ချောင်းရယ်လို့အံသွား ၄ ချောင်း ရှိပါတယ်။အသက်၁၆နှစ်ကနေ၂၁ နှစ်ကြားမှာ ပေါက်တတ်တာမို့အင်္ဂလိပ်လိုအခေါ် Wisdom teethပညာရှိသွားဆိုပြီးတွင်နေတာပါပဲ။ ဒီလိုအံဆုံးပေါက်ချိန်မှာ​ကောင်းကောင်း မထွက်လာနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊​ဘေးကသွားတွေ၊ အရိုးတွေ၊သွားဖုံးတွေနဲ့ နေရာကျပ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အံဆုံးညပ်တဲ့ပြဿနာ ဖြစ်တော့တာပါ။သူ့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ – ● အံဆုံးနားကသွားဖုံးတစ်ဝိုက်နာကျင်တာ● […]
အားလုံးပဲ ဓညင်းသီးဆိုတာကြားတာနဲ့ ပြုတ်ပီးပဲငါးပိရည်လေးနဲ့တို့စားလိုက်ရမလား။ ဟင်းအဖြစ်ပဲချက်စားမလား။ဆားရည်စိမ်လေးပဲလုပ်စားမလားဆိုပြီးအမျိုးမျိုးကိုလုပ်စားချင်နေတော့တာပါပဲ။စားပြီးရင်အနံ့အသက်တော့ ဆိုးပေမယ့်စားနေတုန်းတော့အရသာလည်းရှိ ထမင်းလည်းမြိန်စေတာကိုး။ဓညင်းသီးမှာ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်အနေနဲ့ ၂၅ဂရမ်သာပါဝင်လို့ပမာဏအရမ်းနည်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပရိုတင်းအနေနဲ့ကတော့ ၁၄ဂရမ် ပါဝင်နေလို့ သိပ်မဆိုးပေမယ့်အဆီပမာဏကတော့သိပ်ပြီးမပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။သူ့မှာသံဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင်အရိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဖော်စဖရပ်စ်လည်းအနည်းငယ်ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကဲဒါဆို အားလုံးပြောနေကြတဲ့ ဓညင်းသီးက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ ? အရမ်းဟုတ်တာပေါ့။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဓညင်းသီးမှာပါဝင်နေတဲ့ djenkolic acid ကြောင့်ပါ။သူက […]
ဒိုင်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်း တာတွေရှိပေမယ့် မလုပ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် ဇော်ပိုင်
ဒိုင်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်း တာတွေရှိပေမယ့် မလုပ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် ဇော်ပိုင် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာကတ်ဆက်ခွေခေတ်ကတည်းကသီချင်းတွေများစွာကို ပြုလုပ်လာပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု များစွာ ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ ဇော်ပိုင်ကိုတော့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဇော်ပိုင်ကတော့သူကိုယ်တိုင် အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေတက်လာတာကြောင့်လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဒိုင်မလုပ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားသွားပြီးကိုယ်ချင်းစာတယ်လို့လည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဇော်ပိုင်ကတော့ The Radar နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ “အခုနောက်ပိုင်း […]
ကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်းကို ပြနေသော လက္ခဏာ (၅) မျိုး
သင့်ကျောက်ကပ်များဟာသင့်ကျန်းမာရေးတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဆိုလျှင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာမှအညစ်အကြေးများနှင့်ပိုလျှံသောအရည်များကို​ကျောက်ကပ်ကနေတစ်ဆင့်စွန့်ပစ်ပေးပါတယ်။ထို့ပြင်အခြားသောကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ​ကောင်းမွန် စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်လည်းကူညီပေးပါသေးတယ်။ ကျောက်ကပ်ကသူ့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို​ကောင်းမွန်စွာမပြုလုပ်နိုင်တော့ပါက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း (renal failure) ဖြစ်ပေါ်နေပြီဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူမျိုး ၃၇သန်းခန့်ဟာ​ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ခံစားနေရပြီးအရွယ်ရောက်သူ ၁၀ ဦးအနက် ၉ ဦးမှာသူကိုယ်တိုင်မသိပေမယ့်​ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကိုခံစားနေရတယ်လို့ လေ့လာချက်များအရသိရပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ပြနေသောလက္ခဏာများမှာ – (၁) သွေးပေါင်တက်ခြင်း ကျောက်ကပ်ကနေဟိုမုန်းများထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းညှိပေးပါသည်။ထို့ကြောင့်​ကျောက်ကပ်ပျက်စီးပါက သွေးပေါင်ချိန်များတက်လာပါသည်။ (၂) ဆီးသွားခြင်းဆိုင်ရာ […]
ဆမ လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရခြင်းအတွက် အယူခံဝင်မည့် ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ
ဆမ လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရခြင်းအတွက် အယူခံဝင်မည့် ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆမ ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆရာဝန်မတစ်ဦးလည်းဖြစ်မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့နန်းမွေစံအယူခံဝင်မယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီက ဇွန်လ သုံးရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာ နန်းမွေစံဟာလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထား ပါတယ်။နန်းမွေစံကို ဆေးကောင်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလကလည်းသတိပေးစာတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ […]
နန်းမွေစံ ရဲ့ ဆမ လိုင်စင်သိမ်းခံရမှုအကြောင်းကို နိုင်ငံခြား သတင်းတွေမှာတောင်ဖော်ပြနေကြပြီ
နန်းမွေစံ ရဲ့ ဆမ လိုင်စင်သိမ်းခံရမှုအကြောင်းကို နိုင်ငံခြား သတင်းတွေမှာတောင်ဖော်ပြနေကြပြီ Sexy ကျကျပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတာကတော့မော်ဒယ်နန်းမွေစံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့်သူ့ပုံရိပ်တိုင်းကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ရင်ခုန်စရာကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်းဝေဖန်မှုတွေခံပေရပေမယ့်လည်းအကောင်းဆုံးရပ်တည်နေတာပါ။ သူကတော့ခုမှာSexy ဆန်ဆန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကြောင့်ခုမှာဆရာဝန်လက်မှတ်ကိုသိမ်းခံရတော့မယ့်အခြေနေမှာရောက်နေတာပါ။သူကိုပရိသတ်တွေကဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကတစ်ခဲနက်ပါ။ဆရာဝန်လက်မှတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတိပေးစာရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့အရင်တုန်းကပုံတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုမှာတော့sexy ကျကျဝတ်စားမှုကြောင့်ဆရာဝန်လိုင်စင်သိမ်းခံရတဲ့အပေါ်နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကတောင်ဖော်ပြခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။CNA, Bangkok Post စတဲ့နာမည်ကြီးမီဒီယာတွေကတောင်ဖော်ပြခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုမှာတော့သူကsexyဆန်ဆန်အဝတ်စားတွေကိုလျော့ပြီးမြန်မာဆန်ဆန်လေးတွေကိုပြန်ဝတ်စားနေတာပါ။ပရိသတ်တွေလည်းဝေဖန်မှုတွေကြားထဲကအကောင်းဆုံးပရိသတ်တွေကိုအနုပညာတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နန်းမွေစံကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်။ Credit -myanmarload Source:Nang Mwe San Unicode နနျးမှစေံ ရဲ့ ဆမ […]
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများမှ တဆင့် နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသားများ
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများမှ တဆင့် နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသားများ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေခေတ်စားလာတာနဲ့ အမျှ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုပရိသတ်တွေ အားပေး ကြည့်ရှုလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသား၊မင်းသမီး တွေကို ဇာတ်လမ်းထဲကဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့တွဲပြီး အားပေးလာကြတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသား (၃)ယာက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။သူတို့ ( ၃ )ယာက်ကတော့ဒေါင်း ၊အောင်ရေချမ်း ၊အောင်မင်းခန့် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအားပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသားတွေရှိရင်လည်း […]
ခါးနာ ခါးကိုက်​​သူများအတွက်​ သတိထားသင့်​​သော လက္ခဏာ များ နှင့်​ ကုသရန်​ နည်းလမ်းများ
လူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးပြဿနာတစ်ခုကို ပြပါဆိုရင် ခါးကိုက်တာကို ပြရလောက်အောင် ခါးကိုက်တဲ့ပြဿနာက ဆိုးလှပါတယ်။ ဆေးခန်းမှာလည်း မကြာမကြာ ခါးကိုက်လို့ဆိုတာ ချည်းပါပဲ။ တကယ်တော့ ခါးကိုက်ဝေဒနာဟာ ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အဆစ်အမြစ်လေးဘက်နာဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ကျောရိုးဆစ် ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတာကလည်း မမေ့သင့်တဲ့ပြဿနာပါပဲ။ဒီလို ကျောရိုးဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ နာတာရှည် ခါးနာတဲ့အနေနဲ့ ၂၀%သောလူကြီးတွေမှာ […]